Dunida oo ka falcelisay ereyadii Donald Trump ee muhaajiriinta – Kasmo Newspaper
Dunida oo ka falcelisay ereyadii Donald Trump ee muhaajiriinta
Updated - January 13, 2018 2:28 pm GMT
London (Kasmo), Dalal badan oo Dunida ka tirsan ayaa jawaabo kulul ka bixiyay ereyadii Donald Trump ee dhiillada xambaarsanaa, kuna saabsanaa muhaajiriinta Maraykanka.
Khamiistii 11kii Jennaayo ayaa Trump, kulan uu kula yeshay Aqalka Cad koox xildhibaanno ah, su’aalay sababta Maraykanku u aqbali karaan muhaajiriin ka soo jeedda, waxa uu ku sheegay ‘Dalal musqulo ah’.
Kulanka waxaa loo qabtay si Madaxweynaha looga codsado in uu dib u eego go’aan looga ceshanayo ruqsadaha degganaanta in ka badan 200,000 oo reer El Salvador ah, oo ku jooga dalka barnaamijka loo yaqaanno TPS (Temporary Protected Status).
Waxaa kale oo la damacsanaa in barnaamijka TPS lagu soo daro muwaadiniinta dalal kale oo Amerikada Dhexe iyo Afrika ka tirsan.
Warka waxaa markiiba la booday Wargaysyada Washington Post iyo New York Times, wuxuuna cabashooyin ka dhaliyay gudaha Congress-ka, Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga labadaba.
Sida Wakaaladda Reuters warinayso,Trump ayaa Jimcihii, 12kii Jenaayo,Twitter ku inkiray in uu adeegsaday ereyadaas, wuxuuse ku adkaystay diidmada qorshaha muhaajiriinta ee Aqalka Senate-ka Maraykanku soo jeediyay.
Mashruucaas oo koox xildhibaannada Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu ka shaqaynayeen intii bilooyin ah wuxuu badbaadin lahaa 700,000 oo carruur sharcidarro ku soo gashay, kuna jooga nadaamkii DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) ee la laalay 6dii September 2017.
Wakiilka xuquuqda Aadanaha ee Qarammada Midoobay, Rupert Colville ayaa ereyada Trump ku tilmaamay ‘midab kala sooc iyo ceeb’ kana hor imaanaya qiyamka Caalamiga ah.
Ururka Midowga Afrika AU ayaa ka dalbaday Donald Trump raalligalin rasmi ah, waxaa kale oo dhaleeceeyay mas’uuliinta dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya,Kenya, Senegal iyo qaar kale oo ka tirsan Yurub iyo Qaaradaha kale.